PressReader - Isolezwe: 2018-07-12 - Onogada bakhala ngokungaholi emtholampilo iHlengisizwe
Onogada bakhala ngokungaholi emtholampilo iHlengisizwe
KUPHAZAMISEKE ukusebenza emtholampilo waHammarsdale, iHlengisizwe Community Health Centre (CHC) ngesikhathi onogada belaxaza umsebenzi bekhala ngamaholo.
Onogada badube ukusebenza izolo ngezikhathi zasekuseni ngoba bethi abaholelwanga.
Omunye wabasebenzi, ocele ukuthi igama lakhe ligodlwe ngoba esaba ukuhlukunyezwa, uthe bekufanele ngabe bahole ngoJuni 30 kodwa bangaholelwa.
Uthe bathole ukuthi inkinga isekutheni akuqondakali ukuthi iyiphi inkampani yonogada okufanele ukuba isebenze emtholampilo.
Uthe kunenkampani ebisebenza phambilini kwathiwa inkontileka yayo iphelile kwase kuqala enye inkampani ngoJuni 1 nokuyileyo ababekholwa wukuthi izobaholela.
“Asizange sihole. Osekusihlukumeza kakhulu wukuthi lezi zinkampani zombili zilwa ngathi singabasebenzi ngoba sithi sisagqoke umfaniswano wenye kufike abalena enye bathi asikhumule sigqoke owabo ngoba yibona okufanele ngabe bayasebenza. Nathi sigcina sesididekile,” kusho umsebenzi.
Izolo abasebenzi bamise ukusebenza ngoba bethi bafuna izimpendulo kubaphathi bomtholampilo ngokuthi iyiphi inkampani ezoqhubeka nokuthi bona bazoqala nini ukuholelwa imali yabo. Bathe ngokuthola kwabo eyodwa yalezi zinkampani yayisa udaba enkantolo ngoba ithi iphikisa ukuqokwa kwalena enye yase inkantolo ivuna yona. Lokhu sekuholele ekutheni ibuye izothi abaqhubeke basebenze phansi kwayo.
“Sitshelwe ukuthi sizoholelwa imali yethu kodwa manje asazi ukuthi kufanele silalele bani. Asizazi ukuthi sizoqhubeka kanjani sisebenza kanje, silinde ukukhunyuliswa umfaniswano ngenxa yalo mbango,” kusho umsebenzi.
Okhulumela uMnyango wezeMpilo, uNksz Ncumisa Mafunda, uthe: “Umnyango usacele imininingwane egcwele esikhungweni sezempilo esithintekayo ukuze uphendule ngendlela enokucophelela nephusile.”